सबैको लघुवित्तको नाफा २ करोडभन्दा बढी
जेठ ८, काठमाडौं । गत साउनमा सर्वसाधारणलाई आईपीओ विक्री गरेको सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नौ महीनामा रू. २ करोड ४६ लाख ८ हजार खुद नाफा गरेको छ । गत वर्षभन्दा यस वर्षको नौ महीनामा उक्त कम्पनीले १२ प्रतिशत बढी नाफा गरेको हो ।
गत वर्ष यस अवधिसम्म कम्पनीले रू. २ करोड १९ लाख ५० हजार खुद नाफा गरेको थियो । यस वर्ष गत वर्षभन्दा १३ प्रतिशत बढी सञ्चालन नाफा गरेको छ । गत वर्ष रू. ३ करोड ४४ लाख सञ्चालन नाफा गरेको उक्त कम्पनीले यस वर्ष रू. ३ करोड ९० लाख यो नाफा गरेको हो ।
उक्त कम्पनीले सार्वजनिक गरेको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार चुक्तापूँजी गत वर्षभन्दा यस वर्ष ६ दशमलव ४७ प्रतिशत बढी भएको छ ।
आईपीओ र १३ प्रतिशत बोनस मार्फत उक्त कम्पनीले चुक्तापूँजी बढाएको हो । आईपीओ खरीद गरेकै वर्ष सर्वसाधारणलाई समेत उक्त कम्पनीले १३ प्रतिशत बोनस दिएको छ ।
उक्त कम्पनीको जगेडा कोष रकम गत वर्षभन्दा ४५ दशमलव ७५ प्रतिशत बढी रू. ३ करोड ३६ लाख २२ हजार कायम भएको छ ।
विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गत वर्षभन्दा ५१ दशमलव ६६ प्रतिशत बढी अर्थात् रू. १ अर्ब ५३ करोड १२ लाख कर्जा सापटी लिएर उक्त कम्पनीले रू. १ अर्ब १९ करोड २ लाख कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
यस वर्ष निक्षेप संकलन रू. ६१ करोड भएको छ । निक्षेप संकलन गत वर्षभन्दा यस वर्ष ८१ प्रतिशत बढी छ भने कर्जा प्रवाह गत वर्षभन्दा १५ दशमलव ९२ प्रतिशत कम भएको रहेको छ ।
कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा अनुपात गत वर्षभन्दा यस वर्ष बढेको छ । उक्त कम्पनीको गत वर्ष यस अवधिसम्म शून्य दशमलव १९ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष १ दशमलव ५७ प्रतिशत कर्जा अनुपात पुगेको छ ।
वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी रू. १६ दशमलव ६० रहेको उक्त कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ११८ दशमलव शून्य ३ छ । राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्षेत्र भएको उक्त कम्पनीले वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गराइ हाल देशका ५४ शाखा कार्यालय मार्फत ३१ जिल्लामा सेवा दिइरहेको छ ।
स्वास्थ्यमा समस्यापछि आइसोलेसनमा रहेका एक युवालाई पोखरा रिफर[२०७७ जेठ, २२]
अस्पतालका कर्मचारी सेल्फ क्वारेन्टाइनमा[२०७७ जेठ, २२]
दाङमा थप १५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि[२०७७ जेठ, २२]
लकडाउनको मोडालिटीबारे छलफल गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठक शुरु [२०७७ जेठ, २२]
१० जनाको कोरोनाबाट मृत्यु पुष्टि, संक्रमितको संख्या २६३४ पुग्यो*[२०७७ जेठ, २२]
१५ ओटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा बापत २ अर्ब ३१ करोड गरे आम्दानी[२०७७ जेठ, २२]
लकडाउनमा खुलेको दुई दिनको कारोबारमा २४ ओटा वाणिज्य बैंकको शेयरमूल्य घट्यो [२०७७ जेठ, २२]
मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्न नयाँ नेपाल लघुवित्तद्वारा विशेष साधारण सभा आव्हान [२०७७ जेठ, २२]